Politique privé | Ny Fanorenana Valisoa - Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Home Resources politika fiarovana fiainan'olona
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia mamaritra ny fomba fampiasan'ny The Reward Foundation sy miaro izay fampahalalana omenao ny The Reward Foundation rehefa mampiasa an'ity tranonkala ity ianao. Ny Reward Foundation dia manolo-tena hiantoka ny fiarovana anao manokana. Raha mangataka aminao izahay mba hanome fampahalalana izay ahafahanao mamantatra anao rehefa mampiasa ity tranokala ity, dia azonao antoka fa izany dia hampiasaina mifanaraka amin'io fanambarana tsiambaratelo io ihany. Ny Reward Foundation dia mety hanova an'ity politika ity indraindray amin'ny fanavaozana ity pejy ity. Tokony hojerenao indraindray ity pejy ity hahazoana antoka fa faly ianao amin'ny fanovana rehetra. Ity politika ity dia manomboka amin'ny 23 Jolay 2020.
Inona no manangona
Mety hanangona ireto fampahalalana manaraka ireto:
Anarana anaran'ny olona misoratra amin'ny alalan'ny MailChimp
Anaran'ny olona misoratra anarana amin'ny kaonty miaraka amin'ny The Reward Foundation Shop
Mifandraisa amin'ny fampahalalana toy ny adiresy mailaka sy ny baikon'ny twitter
Mifandray amin'ny olona na fikambanana entana mividy entana na serivisy
Fampahalalana hafa mifandraika amin'ny fitantanana ity tranonkala ity
Inona no hataontsika amin'ny fampahalalana isika hanangona
Izahay dia mitaky an'ity fampahalalana ity hamaly ny fanontanianao, hivarotra entana na serivisy aminao amin'ny alàlan'ny fivarotanay, hanomezana anao newsletter raha misoratra anarana ianao ary ho an'ny fanadihadiana anatiny ho an'ny tanjona dokam-barotra na marketing.
Raha te-hisoratra anarana amin'ny Newsletter izahay dia misy dingana mandeha ho azy ho anao hampiatoana ny fahazoana taratasy misimisy kokoa avy amin'ny The Reward Foundation. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny pejy "Mifandraisa" ary hamafisinay ny fanesorana anao amin'ny lisitra.
Manolotra dingana ho anao ny fivarotana hamafana ny kaontinao. Hofafanay avy eo ny angon-drakitrao manokana mifandraika amin'io kaonty io.
Isika ny hanao izay hifehezana fa ny vaovao azo antoka. Mba hisorohana ny tsy nahazoan-dalana fidirana na ny famborahana, efa nametraka mety ara-batana, elektronika sy pitantanana fomba fiasa mba hiaro sy hiarovana ny vaovao an-tserasera dia manangona.
Links ny vohikala hafa
Ny tranonkala dia mety ahitana rohy amin'ny tranonkala hafa mahaliana. Na izany aza, Rehefa nampiasa ireo rohy ny miala amin'ny toerana, dia tokony marihina fa tsy manana fanaraha-maso ny 'izany tranonkala. Noho izany, tsy afaka ny ho tompon'andraikitra amin'ny fiarovana sy ny fiainana manokana ny misy vaovao izay manome raha mitoetra nitsidika toerana toy izany sy ny toy izany toerana tsy fehezin'ny ity fanambarana fiainana manokana. Tokony mitandrina sy mijery ny fiainana manokana fanambarana ampiharina amin'ny vohikala amin'ny fanontaniana.
Mifehy ny mombamomba
Azonao atao ny mangataka antsipiriany momba ny mombamomba anao izay tazoninay momba anao ao ambanin'ny lalàna momba ny fiarovana ny data 1998. Fandoavambola kely no aloa. Raha mila kopian'ny fampahalalana voatanisa aminao ianao dia manorata any amin'ny The Reward Foundation c / o The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR United Kingdom. Raha mino ianao fa misy fampahalalana izay tazoninay aminao dia tsy marina na tsy feno, dia manorata aminay na alefaso mailaka aminay haingana araka izay azo atao, amin'ny adiresy etsy ambony. Hanitsy avy hatrany izay vaovao hita fa tsy marina izahay.
Fivarotana valisoa valisoa
Manangona vaovao momba anao izahay mandritra ny fizotry ny fizahana ao amin'ny magazay. Ity manaraka ity dia famaritana amin'ny antsipiriany kokoa momba ny fomba nitantananay ny fizotry ny politika momba ny tsiambaratelo ao amin'ny Shop.
Ny zavatra angoninay sy tahirinay
Na dia mitsidika ny tranokalanay aza ianao, dia ho hitanay:
Ireo vokatra efa hitanao: hampiasaintsika izany, ohatra, asehoy ireo vokatra efa hitanao vao haingana
Ny toerana, ny adiresy IP ary ny karazana tranokala: hampiasaintsika amin'ny tanjona toy ny fanombanana ny haba sy ny fandefasana
Adiresy fandefasana: hangataka anao hiditra ity izahay mba hahafahanao, ohatra, manomboa fandefasana alohan'ny hametrahana baiko, ary mandefa anao ny baiko!
Hampiasa cookies ihany koa izahay hanarahana maso ny atin'ny sobika rehefa mijery ny tranokalanay ianao.
Rehefa mividy entana izahay dia hangataka anao hanome vaovao, anisan'izany ny anaranao, ny adiresy faktiora, ny adiresinao, ny adiresy imailaka, ny nomeraon-telefaoninao, ny antsipirian'ny carte de crédit ary ny fampahalalana momba ny kaonty toy ny anarana sy ny tenimiafina. Hampiasa an'ity fampahalalana ity izahay ho an'ny tanjona, toy ny:
Alefaso ny fampahalalana momba ny kaontinao sy ny baikonao
Valio ny fangatahanao, anisan'izany ny famerenana sy ny fitarainana
Fandoavam-bola ary manakana ny hosoka
Apetraho ny kaontinao ho an'ny entanay
Manajà ny adidy ara-dalàna ananantsika, toy ny fandoavan-ketra
Ampitomboy ny fanatitra atolotrao
Alefaso ireo hafatra momba ny varotra, raha misafidy ny handray azy ianao
Raha mamorona kaonty ianao, dia hitazona ny anaranao, ny adiresinao, ny mailaka sy ny laharan'ny findainao, izay hampiasaina handresena ny fividianana ny baiko amin'ny ho avy.
Amin'ny ankapobeny izahay dia mitahiry ny fampahalalana momba anao raha mbola mila ny fampahalalana momba ny tanjonay hanangona sy hampiasa izany izahay, ary tsy takiana ara-dalàna hanohizantsika izany. Ohatra, hitahiry fanazavana momba ny filaminana mandritra ny 6 taona izahay ho an'ny tanjon'ny hetra sy ny kaonty. Anisan'izany ny anaranao, ny adiresy mailaka sy ny adiresy fandefasana ary ny adiresy fandefasana.
Hisy fanehoan-kevitra na fanehoan-kevitra ihany koa, raha misafidy ny handao azy ireo ianao.
Iza no afaka miditra ao amin'ny ekipanay?
Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia mahazo ny fampahalalana omenao anay. Ohatra, ny Mpandrindra sy ny Manam-pivarotana dia afaka miditra:
Mametraka fampahalalana tahaka ny zavatra novidina, rehefa nividy sy ny toerana tokony halefa, ary
Fampahalalana mpanjifa toy ny anaranao, adiresy mailaka, ary ny faktiora sy ny fandefasana vaovao.
Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia afaka mahazo io vaovao io mba hanatanterahana ny baiko, ny volan'ny fikarakarana ary ny fanohanana anao.
Ny anjarantsika amin'ny hafa
Eo ambanin'ity politika manokana ity dia mizara fampahalalana amin'ny antoko fahatelo izahay izay manampy anay hanome ny baiko sy serivisy fivarotana ho anao; ohatra PayPal.
Mandray vola amin'ny PayPal izahay. Rehefa mividy fandoavam-bola, ny sasany amin'ireo rakitrao dia alefa amin'ny PayPal, ao anatin'izany ny fampahalalana takiana amin'ny fanodinana na fanohanana ny fandoavana, toy ny fividianana totalisany sy famoahana vaovao.